အစ္စတန်ဘူလ်ရှိည metro 2.5 595 သည်တစ်လလျှင်ခရီးသည်ထောင်သောင်းချီသယ်ဆောင်ခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ 2.5 ညမက်ထရိုသည်တစ်လတွင်ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်
19 / 11 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ
အစ္စတန်ဘူလ်တွင် 595 တစ်ထောင်ကျော်သည်ညဥ့်နက်မြေအောက်ရထားဖြင့်ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။ မြူနီစီပယ်အရာရှိများကဝင်ငွေကမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးရှိတယ်။
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) 30 သည်subဂုတ်လတွင်စတင်ခဲ့သောညဥ့်နက် 595 ထောင်ပေါင်းများစွာ 481 လူများနှင့်အတူယနေ့ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ 245 တစ်ထောင် 908 ခရီးသည်များနှင့်Yenikapı-Hacıosmanမက်ထရိုများသည်စနေနေ့နှင့်စနေနေ့များကိုသာဆက်သွယ်သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွင်းအသုံးအများဆုံးလိုင်းများဖြစ်သည်။ ထို့နောက် 146 ထောင်ပေါင်း 746 ခရီးသည်များနှင့်Kadıköy-Tavşantepe (Pendik) မက်ထရို 118 ထောင်ပေါင်း 410 ခရီးသည်များနှင့်အတူYenikapı-Atatürkလေဆိပ်မက်ထရိုနောက်ဆက်တွဲ။
IMM Press Consultancy မှရရှိသောသတင်းများအရအောက်တိုဘာလတွင်9ညမြေအောက်ရထားပျံသန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ် 11 တစ်ထောင် 110 နှင့်တစ်နာရီပျမ်းမျှ 852 ခရီးသည်များခရီးထွက်ခဲ့သည်။ Metro A.Ş. ၏ 2018 ၏အချက်အလက်များအရတူညီသောမက်ထရိုသည်တစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီလျှင် 21 လူထောင်ပေါင်းများစွာကိုသယ်ဆောင်သည်။ လိုင်းများသည် 580 မတိုင်မီအထိသိပ်သည်းမှုမရှိသော်လည်းအချို့သောခရီးများသည် 02.00 ပြီးနောက်အချည်းနှီးသောလှည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
“ ညဥ့်မြေအောက်ရထားလမ်း” ဝင်ငွေဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်များစွာမြင့်မားနေတယ်လို့ IMM Press Advisory မှအရာရှိတစ် ဦး ကပြောကြားသည်။
Night Metro အကြောင်း
စိတ်ကိုတစ်ဦးမြို့ပြလူနေမှု 24 နာရီ "Lines ပြုလုပ်ခြင်း Metro ညခရီးများထွက်ခြင်း" ၏အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏လိုအပ်ချက်များကိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်တနင်္ဂနွေအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်အားဖြင့် 24 မြေအောက်အများပြည်သူအားလပ်ရက်၏နာရီပေးတောင်းဆိုနေပြီ။
လျှောက်လွှာ၏အကျယ်အ ၀ န်းတွင် 30 သည် Metro Istanbul တွင်တည်ရှိသည်။ M1A Yenikapı-Atatürkလေဆိပ်, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 ÜsküküidaysskübüidaysskübüholskübüHisskükü - ဗတ်စ်၊ skskükü၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လေဆိပ်)6နာရီလည်ပတ်မှုပြီးဆုံးလိမ့်မည်
• 29 သြဂုတ်လတွင်နံနက်ခင်း၌ 06: 00 သည်နံနက်ယံ၌ 30 မှစတင်သည်, သြဂုတ်လ 00 - 00 မှညညလည်ပတ်မှုသို့ပြန်သွားပါမည်။
• 30 သြဂုတ်လနံနက် 06 - 00 အနေဖြင့်၊ စနေ၊
• 31 သြဂုတ်လ 00: 00-06: 00 ညစျေးနှုန်း၊ 06: 00 မှ 1 စက်တင်ဘာ 00: 00 စနေ၊
• 1 စက်တင်ဘာ 00: 00-06: 00 ညလုံးအခကြေးငွေ၊ 06: 00-00: 00 စနေ၊
ပြေးခုံပစ်နှင့် Business သလားလုပ်နည်းအထူးပွဲနေ့ရက်များ?
24 တစ်ဦးအမည်ခံနှင့်အတူညဥ့် mode ကိုပြောင်းရန်ပါလိမ့်မယ်: 00 နာရီကြံ့ခိုင်ရေး Nights Metro ရက်ပေါင်းဘယ်အချိန်မဆိုယူအခြိနျ extension ကိုဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့သို့မဟုတ် IMM ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာရက်ပေါင်းကိုက်ညီနှင့် 00 နာရီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လိုင်းများအတွက်အကြိမ်ရေတစ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲအချိန်နှင့်အတူညဥ့်မက်ထရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ။ ယခင်ကာလဝန်ဆောင်မှု၏အဆုံးတိုင်အောင်အကာ extension ကိုပေးတော်မူလတံ့၌ရှိသကဲ့သို့, လုပ်. ခံရရန်6ကျန်လိုင်းများအပြင်ဘက်လိုင်း, အချိန်ရုံတစ်ခု extension ကိုပါ။ ဒါကြောင့်အထူးကိစ္စကြောင့်ထုတ်ဖော်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်; M3 Kirazli-အိုလံပစ်-Başakşehir, T1 ကျောက်ခေတ်-Bağcılar, T3 Kadıköy-မိုးတား, T4 Topkapi မင်္ဂလာပါ-Masjid-i နှင့်ဤနိယာမနှင့်အတူ F1 Taksim-Kabatas လိုင်းအချိန်ကို extension ကိုဖြစ်စေမည်။
စီမံကိန်းမူဘောင်အတွင်းတွင် 24 လိုင်းသည်ဘူတာအားလုံးနှင့်အတူလည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီးလိုင်းများအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သောတူညီသောလုံခြုံရေးအစောင့်များသည်ညဘက်စစ်ဆင်ရေးတွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ လိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများနှင့်လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစင်တာတို့သည်ပုံမှန်လည်ပတ်သောအခြေအနေများတွင်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပြproblemsနာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့်မြင့်မားသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုံခြုံရေး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန်ညဘက်စစ်ဆင်ရေးများအတွင်းအချို့သောဝင်ပေါက်များနှင့်ထွက်ပေါက်အချို့ကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်။ ဘူတာရုံရှိဝန်ထမ်းများမှသတင်းအချက်အလက်နှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်လက်လှမ်းမှီသောစာရင်းများ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုထဲမှာကို Maintenance လှုပ်ရှားမှုများ?
ကျနော်တို့ကဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်က Metro အဖြစ်အဆင်ပြေအတွက်သွားလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ခရီးသည်ငါတို့၏ကိုယ်ကို Maintenance Concept ကိုမှမွငျ့မား sensitivity ကိုနှင့်အရေးပါမှုသည်။ ထို့အပြင်လိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးမြင့်မားတိများနှင့်အောင်မြင်မှုနှုန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြုပြင်လုပ်ဆောင်မှုများအလွန်အရေးပါမှု attach ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေအောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းညဉ့်စီးပွားရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု Concept ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအပြောင်းအလဲတချို့ဝန်ဆောင်မှု၏တူညီသောအရည်အသွေးကိုဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့ကြလျက်ရှိသည်။ မြေအောက်ရထားကျန်ရှိနေသေးသောလိုင်းများအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်လုပ်ဆောင်မှုများမှတပါးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်စီစဉ်ထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလှုပ်ရှားမှုများနင်္လာမှသောကြာညဥ့်အလုပ်, ညဥ့်မြေအောက်ရထားစနစ်ကလျှောခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုနောက်ဆုံးအဖြစ်လျက်ရှိတနင်္ဂနွေမှရွှေ့ပြောင်း်ထမ်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ခွင်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပြတ်တောက်သေချာပါလိမ့်မည်, ကျွန်ုပ်တို့၏သီတင်းပတ်အတွင်းလိုင်းများကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်အဖြစ်ထို့ကြောင့်ညဥ့်အစေခံပါလိမ့်မယ် ။
ညဥ့်က Metro စျေးနှုန်း
၆ လအတွင်း Night Metro သည်ခရီးသည် ၁ သန်း ၂၁၀,၀၀၀ ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်
TCDD Erzurum949 တထောင်တစ်လလျှင်သယ်ဆောင်ခရီးသည်
Çerkezköy ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လ613 Gara ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်
Akçaray'lသန်း31 650 တထောင်ခရီးသည်တစ်လပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်
ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်လ Belva ကတ်များအားဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည် 567
Kadikoy-Kartal မက်ထရိုတစ်နေ့လျှင် 700 တထောင်ခရီးသည်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်
Başakşehir Metro-Kirazli ပထမဦးဆုံးအကြိမ်327 600 တထောင်ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ
Şişhane-Haliç Metro 70 တထောင်တစ်နာရီလျှင်ခရီးသည်ရွှေ့မည်
ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Torbali သုံးစွဲမှု4500 လ izban ခဲ့
Night Metro ကို Istanbul တွင်လူဘယ်နှစ်ယောက်သယ်ဆောင်ခဲ့သနည်း
ညဥ့်က Metro ကြေးအချိန်ဇယား
ညဥ့်က Metro လိုင်း
Night Metro မှာလုံခြုံရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Metro Inc က
Yenikapi-Ataturk လေဆိပ်က Metro